Dowladaha Somalia iyo Qatar oo magaalada Doha ku saxiixday heshiisyo Mashaariic kala duwan - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Dowladaha Somalia iyo Qatar oo magaalada Doha ku saxiixday heshiisyo Mashaariic kala duwan
Dowladaha Somalia iyo Qatar oo magaalada Doha ku saxiixday heshiisyo Mashaariic kala duwan
Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa magaalada Dooxa ku kala saxiixday shan heshiis iyo Sedex is-afgarad oo khuseeya arrimha maalgashiga, ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha. Guddi farsamo oo ka socda Soomaaliya iyo Qatar ayaa lagu heshiiyay in ay ka shaqeeyaan dhamaystirka heshiisyada la kala saxiixday si fulintooda loo boobsiiyo, dadka Soomaaliyeedna dhawaan u helaan faa’iidooyinka kasoo baxa.
Wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka wasaaradda qorshaynta, maalgashiga, iyo horumarinta dhaqaalaha iyo wasiir ku-xigeenka maaliaydda oo qayb ka ah wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhanka Soomaaliya heshiiska u saxiixay. Heshiisyada waxaa sidoo kale kamid in diyaaradda Qatar airways ay billaawdo bartamaha sannadka 2019 duullimaado ay ku imaanayso magaalada Muqdisho.
Dowlada Somalia oo Faahfaahin ka bixisay sababaha loo xiray Mukhtaar Roobow (Akhriso)
Dowladda Mareykanka oo ku dhawaaqday Boqolaal Milyan Doolar oo la siinayo Soomaaliya
Shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya oo maanta furmaya
Ajendaha Shirka maanta ka furmaya Muqdisho